Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Thailand » Filoham-pirenena Skål Asia: mifanena amin'ny kandidà Andrew J. Wood
Associations News • Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Dinika fizahan-tany • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao isan-karazany
Ny filoha lefitry ny Skål Asia Andrew J. Wood dia nanambara androany fa hirotsaka hofidina ho filoham-pirenena izy amin'ny 2021-2023 Skål Asia fifidianana izay atao amin'ny 25 Aogositra 2021.
Resadresaka nifanaovana tamin'ny kandida filoham-pirenena Skål Asia Andrew J. Wood sy Dr. Scott Michael Smith, mpandrindra ny fampianarana ao amin'ny Oniversite Assump avy amin'ny Departemantan'ny fandraisam-bahiny sy ny fitantanana fizahan-tany.
Tsy nahagaga ny maro ny fanendrena an'i Wood ho lehiben'ny asan'ny Skål Asia ambony.
Izy no mpikambana lava indrindra amin'ny birao Azia ary zokiny indrindra amin'ny filoha lefitra telo ao amin'ny birao.
Wood dia niditra voalohany tao amin'ny birao Skål Asian Area (SAA) 16 taona lasa izay talen'ny Fampandrosoana 2005-2009 ary efa nitana ny biraon'ny VP, voalohany nandritra ny 2009-2010 ary farany indrindra hatramin'ny 2017 ka mandraka ankehitriny.
Wood dia filoha teo aloha tao amin'ny Komitim-pirenena Thailandey 2012-14 ary filohan'ny Skål Bangkok Club ankehitriny, toerana izay nohazoniny voalohany tamin'ny taona 2008-10 ary ankehitriny koa ankehitriny.
Tamin'ny 2010 dia niditra ho mpikambana ao amin'ny Birao Mpanatanteraky ny Skål International ho talen'ny. Mpikambana Skål hajaina sy voaravaka izy ary Wood dia manana serivisy miavaka mandritra ny 29 taona. Tsy misy fanontaniana fa Wood dia tsy ny traikefa sy ny fahaiza-mitarika hitarika an'i Skål Asia fotsiny fa hitondra eo amin'ny latabatra firaketana serivisy manaitra ao Skål International, nohajaina nandritra ny taona maro.
Ny haren'ny fahalalana sy ny fifandraisan'i Wood - samy ao anaty Skål nefa manan-danja ihany koa amin'ny sehatra iraisam-pirenena momba ny dia sy fizahan-tany - no mahatonga azy ho kandidà idealy. Teratany anglisy, manana asa matihanina amin'ny fandraisam-bahiny any Thailand, trano natsangan'i Wood nandritra izay 30 taona lasa izay, dia nahita ity mpitantana jeneraly efa za-draharaha ity nitantana hotely tsara indrindra teto amin'ny firenena, ary toeram-pialofana, anisan'izany ny Royal Cliff Group of Hotels. Ny Royal Cliff Resort no toerana fampiantranoana ny Kongresy Eran-tany Skål eran-tany nahomby tamin'ny 2006.
Tamin'ny taona 2019 dia nomena an'i Skål's Membre D'Honneur izy ary mpandray ny Skål Order of Merit, natolotry ny filoha Mok Singh tamin'ny 2013 ary mpandray ny Loka Prål President, natolotry ny filoha Peter Morrison tamin'ny 2020.